Ra’isul Wasaare Khayre oo Xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dowladda Talyaaniga – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Mashruuca Tayeynta Shaqaalaha Rayidka
Waxaa la qoray March 20, 2018 March 23, 2018
Ra’isul Wasaare Khayre oo Xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda dowladda Talyaaniga
MUQDISHO —Raisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Ergeyga Gaarka ah ee dowlada Talyaaniga u qaabilsan Geeska Afrika Mudane Luciano Pezzotti iyo wafdi uu horkacayo oo maalintii labaad booqasho ku jooga Magaalada Muqdisho Caasimada Somalia.
Mudane Khayre iyo Luciano Pezzotti ayaa ka wada hadlay qodobo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal, kordhinta taageerada Talyaanigu siiyo Somalia gaar ahaan dhinacyada amaanka, dhaqaalaha iyo soo celinta adeegyada bulshada.
Raisul Wasaaraha ayaa warbixin ka siiyey Luciano Pezzotti iyo wafdigiisa horumarka ay ku talaabsatay Xukuumadiisa mudadii sanadka aheyd ee ay jirtay iyo guulaha ay ka soo hoysay hagaajinta Maamulka dhaqaalaha dalka, Xoojinta amaanka, dib u dhiska iyo dib u yagleelida adeegyada bulshada ee ku burburay dagaaladii horey dalka uga dhacay, isagoo dowlada Talyaaniga ka codsaday iney xoojiso taageerada ay siiso Soomaaliya.
Ergeyga Gaarka ah ee dowlada Talyaaniga u qaabilsan Geeska Afrika Luciano Pezzotti oo isna munaasabadan ka hadlay ayaa ka mahad celiyey sida diiran ee dalka loogu soo dhoweeyey, wuxuuna xusay in isaga iyo wafdigiisa ay lama filaan ku noqotay horumarka xoogga leh ee ka jira caasimada gaar ahaan Nabada iyo dib u dhiska.
Luciano Pezzotti ayaa sheegay in dowlada Talyaaniga ay muhimad gaar ah siineyso xoojinta taageerada Somalia, wuxuuna balan qaaday inuu madaxda dalkiisa gaarsiin doono horumarka iyo nabada ka jirta caasimada, isagoo dowlada federaalka ku amaanay dedaalka ay ugu jirto sidii Soomaaliya ay mar kale cagaheeda isugu taagi laheyd, wuxuuna kulankaas ku dhamaaday jawi isafgarad leh.
Wafdiga uu horkacayo Ergeyga Gaarka ah ee dowlada Talyaaniga u qaabilsan Geeska Afrika Luciano Pezzotti ayaa shalay kulamo la qaatay madax kale oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Ing. C/raxmaan Cusmaan Yariisow, waxayna mudada ay dalka joogaan sidoo kale kulamo la qaadan doonaan madax kale oo ka tursan goleyaasha dowladda.
Cabdiraxmaan Macallin Xusseen
Qormadii HoreHore Raisul Wasaaraha Soomaaliya oo dadweyne fara badan kala qeyb galay daawashada ciyaar xiiso badan
Qormada XigtaKu Xiga Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya oo ansixiyey heshiisyo lala galay dowlada Turkiga
© 2018 Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha